Ny Cosmopolitan of Las Vegas Resort dia manokatra ny varavarany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny Cosmopolitan of Las Vegas Resort dia manokatra ny varavarany
Desambra 20, 2010
LAS VEGAS - Ny Cosmopolitan of Las Vegas, ilay trano fandraisam-bahiny antenaina fatratra ao afovoan'ny Las Vegas Strip, dia nanokatra ny vavahady tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 8 desambra tamin'ny 15 desambra.
LAS VEGAS - Ny Cosmopolitan of Las Vegas, ilay trano fandraisam-bahiny antenaina fatratra any afovoan'i Las Vegas Strip, dia nanokatra ny varavarana ho an'ny besinimaro tamin'ny 8 alina ny 15 Desambra. Ny fety tamin'ny hariva dia nisy fety voalohany ho an'ireo vahiny nasaina izay nahitana feon-kira telo natokana ho an'i The Killers, olona teo aloha sy Brandon Flowers, zanaky ny Las Vegas, sakafo fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana P3 Commons ary fijerena ny fanangonana bizina fivarotana. Fotoana kely talohan'ny nisokafan'ny varavarana, ny filalaovana fombafomba nentim-paharazana dia nataon'i Mayer Hawthorne mpitendry mozika. Tamin'ny fanavaozana voalohany indrindra ho an'ny sehatry ny fialamboly malaza Las Vegas, ny kaonseritra alina misokatra dia naseho tamina marquee The Cosmopolitan, izay midika fa ireo mpandalo tao amin'ny Las Vegas Strip dia afaka nijery ilay kaonseritra mivantana tamin'ny LED- 65 metatra lava. fampisehoana marquee.
Vao maraina ny andro, ny filoha jeneralin'ny The Cosmopolitan John Unwin dia nitarika ny lanonana fanapahana tadin-kazo iray tao amin'ny Boulevard Casino vaovao, izay misy varavarankely mifampitohy mankamin'ilay Strip malaza eran-tany. Nanatevin-daharana azy ny mpitarika hafa mpanatanteraka avy amin'ny The Cosmopolitan ary koa ny ekipa mpamorona endrika, haingo ary fananganana kilasy eran'izao tontolo izao.
The Cosmopolitan of Las Vegas dia mamolavola endrika amam-bika miaraka amina toe-tsaina mahaliana sy mahaliana - manome karazana fanandramana Las Vegas tena hafa. Ny efitrano fandraisam-bahiny misy efitra vaovao 2,995 dia ahitana habaka fonenana feno habaka misy fonenana manokana misy endrika tsy manam-paharoa sy famolavolana mahatalanjona nataon'i architects David Rockwell, Jeffrey Beers, Adam D. Tihany ary Friedmutter Group. Ny vahiny dia hankafy traikefa fisakafoanana isan-karazany avy amin'ny chef malaza ao amin'ny firenena, serivisy sy fampitaovana tsy nisy toy izany, fanolorana mpikambana vaovao vaovao, tontolo pisinina telo miavaka, trano filokana iray metatra toradroa, Sahra Spa & Hammam, Marquee Nightclub & Dayclub, fivarotana enina tsy manam-paharoa ary fahitana manaitra ny Las Vegas Strip isaky ny mandeha.
"Ny Cosmopolitan dia momba ny famoronana traikefa fialan-tsasatra voatokana amin'ireo zavatra misy ankehitriny any Las Vegas," hoy i John Unwin, tale jeneralin'ny The Cosmopolitan. “Rehefa manambatra efitrano malalaka ianao, volavola avo tahaka ny talenta toa an'i David Rockwell, fanangonana fisakafoanana nandrombaka am-pitandremana, serivisy sy lalao tsy manam-paharoa, fantatray fa ny vahiny dia hanana traikefa iray izay niverina tamin'ny vanim-potoana iray izay nahatsapan'ireo vahiny fa nifandray, nahazo aingam-panahy ary nifandray avy amin'ny toeram-pivahinianan'izy ireo. ”
Miorina amina toerana afovoany-Strip tadiavina, ny endrika tsy manam-paharoa mitsangana mitafo an-tampon'ny The Cosmopolitan amin'ny tany 8.7 hektara fotsiny dia mirehareha amin'ny fahitana ny lanitra Las Vegas, ahafahan'ny vahiny mahatsapa fa tena izy ireo no ivon'ilay tanàna mavitrika nefa mitazona dian-tongotry ny boutique style.
Ny tilikambo atsinanana sy andrefana misy rihana 50 dia misy efitrano fandraisam-bahiny sy condominium midadasika manomboka amin'ny 730 metatra toradroa ka hatramin'ny 5,400 metatra toradroa ankoatry ny efitrano fandraisam-bahiny misy rihana telo misy rihana telo mifanila amin'ny tokotanin-tseranana dobo Andrefana. Ny haingo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ankehitriny nataon'i David Rockwell dia hanasongadinana faritra malalaka, efitra fandroana mihaja, fikitika zato nefa tsy manam-paharoa, ary maro no misy terraces mivelatra miaraka amin'ny fahitana ny Strip. Ny efitrano tsirairay dia misy takelaka fanaraha-maso teknolojia manara-penitra, fahitalavitra efijery plasma, rafitra fialamboly, Internet tsy misy tariby ary trano fisotroana fampiasa ao amin'ny efitrano. Ny efitrano fandroana be loatra dia manome fotoana milamina tsy ampoizina miaraka amin'ny fomba mahatalanjona - fandroana mandroboka japoney, orana misy orana ary gorodona marbra no mamarana ny traikefa amin'ny fandroana vahiny.
The Cosmopolitan of Las Vegas dia manolotra foto-kevitra momba ny fahandroan-tsakafo avy amin'ny mpahandro sakafo ambony sasany ao amin'ny firenena ary lisitra fisakafoanana vaovao, any Las Vegas. Hatramin'izao, ny laharana malaza dia: Blue Ribbon Sushi Bar & Grill avy amin'ny restaurateurs Bruce sy Eric Bromberg; Sina Poblano sy Jaleo, samy avy amin'i Chef Jose Andres; Comme Ca avy amin'i Chef David Myers malaza any Los Angeles; restaurateur iraisam-pirenena Costas Spiliadis 'Estiatorio Milos; Holsteins, hevitra burger vaovao manaitaitra avy amin'ny Block 16 Hospitality; Scarpetta sy DOCG, samy avy amin'i chef Scott Conant, mpandresy loka; ary trano fivarotana steak malaza STK avy amin'ny The ONE Group.